अबको निषे-धाज्ञा मोडालिटी ‘लुजडाउन’ । – Yuwa Aawaj
अबको निषे-धाज्ञा मोडालिटी ‘लुजडाउन’ ।
जेठ २५, २०७८ मंगलबार 177
काठमाडौं : सरकारले जारी निषे’धाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुज’डाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो चरणको कोरो’ना संक्रम’ण सुरु भएपछि गत १६
वैशाखबाट जारी निषे’धाज्ञाको ‘मोडालिटी’ सर्वसाधारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा नि’षेधाज्ञा छ ।
खोटाङ र मनाङमा भने नि’षेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषे’धाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परि’मार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
‘निषेधा’ज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडालिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधाज्ञा लुजडाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले सोमबार राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयले यो शैली अवस्था हेरेर अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर सोबारे निर्णय लिन सक्नेछन् । गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अपनाउन लागिएको हो ।
यो शैलीअन्तर्गत निर्माण, उत्पा’दनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्षयाम सुरु भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषे’धाज्ञा ‘मोडालिटी’मा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मलसहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन् । यो खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevप्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने–जोर्डनसँग हार्नुको कारण ।
Nextबिएण्डसी अस्पतालमा ८ लाख तिर्न नसक्दा काे-राेना संक्र’मित राजवंशी घर जान पाएनन् !
बधाई ! किरण चेम्जोङले भारतमा मचाए तहल्का, सयौ भारतियलाई पछि पार्दै बने ‘आई लिग’को उत्कृष्ट गोलकिपर ।
अमेरिकाबाट यति ठुलो सहयोग लिएर काठमाडौं आइपुग्यो जहाज !
थप अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन ‘एयर लिफ्ट’ गर्नुपर्ने सुझाव ।
महामा’रीमा का-लोबजारी – कृत्रिम अभाव देखाएर खाद्यवस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि ।
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1107)